माओबादी बैठकमै टोपबहादुर र प्रचण्डबीच भएको चर्काचर्की सुन्नुहोस गोप्य अडियो
काठमाडौं । संविधान संसोधनको विषयलाई लिएर मुलुक मुठभेडको अवस्थामा पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमाले सहितका दलहरु देशैभरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गराए पनि
कागजको नोट बनाउन पनि भ्याई नभ्याई,हेर्नुहोस् नोट कसरी छापिन्छ(भिडियोसहित)
भारतीय ५ सय र १ हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लागेपछि यतिबेला भारतीय नयाँ नोट छाप्ने स्थानमा भ्याई नभ्याई छ । यतिसम्म कि चौबिसै घण्टा नोट छाप्ने कार्य भईरहेको छ । एक
काठमाडौँ । चर्चित नेपाली चलचित्र छक्का पन्जाका संगीतकार दिपक शर्मा अब मोडेल पनि बनेका छन ।आफ्नै शब्द संगीत अनि आफ्नै स्वोर रहेको गीत ‘हे बरै’ बोलको गीतको भिडियोमा भद्रगोल सिरियलकी
यात्रु ठग्ने ६८ सुमोबाट बढी भाडा फिर्ता
काठमाडौँ। चाबहिल चोकमा ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, खोटाङ र काँकडभिट्टा जाने टाटासुमो तथा हायस गाडीले दसैंको मौका छोपी यात्रुसँग लिएको बढी भाडा प्रहरीले फिर्ता गराएको छ । ती गाडीले प्रतिटिकटमा रु
के तपाई अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो देशको संबिधान निर्माण गर्दा बिदेशीसँग पैसा लिनेले कस्तो संबिधान बनाउला ? संबिधानसभाबाट संबिधान पारित गर्दैगर्दा बिदेशीसँग पैसा लिएको कुरा कोही कसैले उठाएका थिएनन्। तर
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नाम दर्ता गराउँदै गरेका प्रचण्डलाई बुहारी सिर्जनाले भनिन् मेरो विवाह र छोराको जन्म दर्ता चाहीँ कहिले गरिदिनुहुन्छ ?
काठमाडौ । प्रचण्डकी बुहारी सिर्जनाले भावुक हुँदै भनिन् । प्रचण्डकी बुहारी र प्रकाश दाहालकी पत्नी भनेर म संग के आधार छ ? खै त्यहि आधारका लागि लडिरहेको छु । र
काठमाण्डौं । सोमबार अचानक आएको हावाहुरीले राजधानीको जनजीवन प्रभावित भएको छ। ठूलो हावाहुरीले राजधानीमा धूलो र सामान उड्दा मानिसहरुलाई सडकमा हिँडडुल गर्न अप्ठेरो भएको थियो। राजधानीको बालाजुमा हावाहुरीका कारण खसेको
फोब्र्सले विश्वका अर्बपतिको सूची सार्वजनिक गर्दा मेरोबारेमा एउटा टिप्पणी लेखेको छ-विनोद हु नेभर वेन्ट युनिभर्सिटी, रिमेन्स नेपाल वन्ली बिलिनियर (विनोद जो कहिल्यै विश्वविद्यालय गएनन्, जो नेपालका खर्बपती हुन्)। तपाईंहरूले जस्तै
काठमाडौं । छोटो समयमै गायन क्षेत्रमा छुट्टै परिचय बनाएका गायक सविन लामाले आफ्नो नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । ‘नेपाल जिन्दाबाद…’ बोलको गीतलाई उनले म्युजिक भिडियोमा ल्याएका हुन् ।